सहवास गर्ने तरिका तर कुन समयमा सहवास गर्दा उपयुक्त हुन्छ? - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
सहवास गर्ने तरिका तर कुन समयमा सहवास गर्दा उपयुक्त हुन्छ?
काठमाडौं, फागुन १२ : यसका वारेमा घरि घरी परिभाषा दिनु राम्रो नहोला । अव हुँदाहुँदै सेक्स यो हो भनेर जानकारी दिने हो भने त झन तनावै होला । यसको मतलव सेक्स भन्ने कुरावाट सवै परिचीत छन । मानिस मात्रै होईन जनावर, पशुपक्षिं देखी सवै जसो । अव कुरा गरौं सेक्समा कसरी भरपुर चरम सुख लिने ।